Thwebula iLivid 5.0.2.4833 – Vessoft
iLivid – a isofthiwe yakhelwe ukulanda amafayela kusuka internet. Isofthiwe ikuvumela ukulanda takhiwo ahlukahlukene alalelwayo video, amafayela stream media, archives, amafayela PDF njll iLivid iqukethe wakha VLC Umdlali wonke amathuluzi ukudlala ethandwa abezindaba takhiwo. Isofthiwe usenza ukulanda amafayela kusuka popular services ukwabelana ezifana 4shared, Megashare, SendSpace, Rapidshare nezinye. iLivid ikuvumela ukubuka idatha ngaphambi ukulanda nokwabelana ulwazi nabangani on Facebook no-Twitter.
Thwebula of amafayela ahlukahlukene kusukela internet
Izilungiselelo of thwebula speed
Amazwana on iLivid:
iLivid Ahlobene software:
Le menenja kulindeleke popular ukuba ahlele ukulandwa amafayela ezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe linamathele iningi iziphequluli futhi engenela ngokuzenzakalelayo okulandwayo.
Ukulanda amafayela kusuka popular video amasevisi kanye nezingosi zokuxhumana nabantu. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlole amafayela ngokusebenzisa unqulo wesi arab ahlukahlukene futhi kukhishwe i amathrekhi audio kusukela kumafayela ividiyo.
Isofthiwe ukulanda HD video kusukela kumasevisi web popular. Isofthiwe iqukethe esakhelwe search engine kanye isiphequluli ukuthola okuqukethwe by angukhiye.
Abadlali Media Downloaders
Umdlali obusebenzayo ukudlala amavidiyo high. Isofthiwe kwenza ukubuka iziteshi TV in the internet bese ulanda okuqukethwe kusukela ethandwa video amasevisi.
Free Download Manager 3.9.7 futhi 5.1.32 beta
Imeneja esinamandla okulandwayo ifayela fast. Isofthiwe linamathele iziphequluli athandwa begodu engenela ukulanda ngokuzenzakalelayo.
jDownloader 0.9.581 futhi 2 beta
Imeneja fast and ephumelelayo okulandwayo ifayela. Isofthiwe ikuvumela ukulanda amafayela kusuka amasevisi ifayela ibamba athandwa begodu kufaka hlangana ukutjhejwa izithasiselo kubo.
Ithuluzi ukulanda futhi wabelane amafayela kwi internet. Isofthiwe ikuvumela ukulanda amafayela kusuka amasevisi ethandwa futhi ukudlala amafayela emidya.
Ithuluzi ukulanda amavidiyo Dailymotion service. Isofthiwe ikuvumela ukulanda iziteshi, uhlu lokudlalwayo kanye ukuguqula takhiwo athandwayo.
Ithuluzi for inqubo lula futhi asheshisa of izithombe amafayela kusukela internet. Isofthiwe ikuvumela ukulanda umculo noma ividiyo kusuka amasevisi athandwayo.
Isofthiwe ukulanda amafayela kusuka video amasevisi kanye sites nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe baxhumana iziphequluli ethandwa kakhulu futhi isekela umsebenzi wasithatha ukusakaza ividiyo.
I unqulo wesi arab idume kuvikeleke izinhlelo ngokumelene izinhlobo ezihlukahlukene izinsongo. Isofthiwe uyakwazi ukugcina amaphasiwedi yomsebenzisi kwezokuphepha nokuvikela inethiwekhi ekhaya ngokumelene spyware.
Isofthiwe zokuphathwa imeyili. Amathuba Wide ayatholakala umsebenzisi ukuklama izinhlamvu futhi ulungiselele software izidingo zakho siqu.
Isofthiwe ukuze ihlole amanethiwekhi for the phambi sengozini. Isofthiwe isekela izinhlobo ezahlukene scan kanye uhlola ukuphepha inethiwekhi yobukhulu ezahlukene noma yinkimbinkimbi.
KeePass 2.30 Professional futhi Portable; 1.29 Portable futhi Classic
Imenenja mahhala iphasiwedi kanye nedatha secret. Isofthiwe isebenzisa ukubethela algorithm ekhethekile ubumfihlo ulwazi olulondolozwe.
Isiqophi converters Umhleli Audio
Enye yezinto eziholela video abahleli ngokusekelwa komsindo enamandla. Isofthiwe unikeza amathuba ububanzi ukudala ividiyo professional in high.
Mozilla Firefox 56.0.1 futhi 57.0b8 rc 3